Fasaxa Shaqada: Dhimasho ama Geeri | LawHelp Minnesota
Time Off from Work: Illness or Death (PDF)267.76 KB
Waxaa suurogal ah in aad codsan karto fasaxa aan lacag lagu siin (fasax) si aad wax uga qabato xaalad bukaan khatar ah, dhimasho ama aad xanaaneyso qof qoyska ah oo xanuun la il daran.
Haddii aad ka soo baxdo shuruudaha (hoos akhri), sharciga dawladda dhexe ee lagu magacaabo FMLA ayaa xuquuq kuu siinaya in aad qaadan karto ilaa 12 blilood oo fasax ah. Shaqadaada waa laguu heynayaa haddii aad qaadato fasaxa FMLA. Taasi waxa ay ka dhigan tahay in shaqadaada dib laguugu soo celiyo ama lagu siiyo mid u dhiganta dhamaadka fasaxaaga FMLA.
Si aad xaq ugu yeelato FMLA, waa:
U shaqeysaa loo shaqeeyaha sharcigu waajib kaga dhigayo fasaxa FMLA
In aad shaqeysay 1,250 saacadood 12ka bilood ee ka horeeya inta aanu fasaxa bilaaban.
Sababta aad fasaxa FMLA u codsaneyso waa in ay noqotaa sabab sharcigu ogol yahay, Taas waxaa ka mid ah mid kasta oo ka mid ah sababaha soo socda:
Ma shaqeyn kartid xanuun aad u daran oo adiga ku haya darteed.
Waxa aad u baahan tahay daaweyn xanuun aad u khatar ah oo ku haya.
Waxa aad u baahan tahay in aad xanaaneyso waalid, ilmo, ama xaaas/say oo dhibaato caafimaad heyso.
Maxaa la iga doonayaa in aan sameeyo si aan u codsado FMLA?
Waa in aad goobta shaqada siisaa 30 maalmood oo ogeysiis ah, haddii aad awoodo. Haddii aadan horey u wargelin, ogeysii sida ugu dhaqsaha badan. Waa in aad u sheegto goobta shaqada sababaha aad uga soo baxday shuruudaha FMLA. Kani waa xafiiskaaga shaqaada oo ogsoon in aad weydiisaneyso FMLA. Fasax bukaan oo aad weydiisato kaliya kuma filna.
Loo shaqeeyaha waxa uu ku weydiiisan karaa cadeyn ku saabsan dhibaatada, sida cedyn uu soo qoro dhakhtarkaaga. Loo shaqeeyaha waxa uu la xiriiri karaa dhakhtarkaaga si uu hubiyo macluumaadka. Fasax kaama doonayaan si ay sidan u sameeyaan.
Fiiro gaar ah: xaaladda caafimaadku waa in ay noqotaa mid aad khatar u ah. Xaaladdu waa mid aad khatar u ah haddii uu tahay “xanuun, dhaawac, naafanimo ama xaalad kale oo jirka ama dhimirka ah oo u baahan in bukaanka la dhigo isbitaalka ama u baahan dhakhar inuu gacanta ku hayo”
Cabasho u soo gudbi Wasaaradda Shaqada ee Mareykanka, Qeyba Mushaharka Iyo Saacadaha Shaqada.
Ka soo wac 1-(866) 4USWAGE 1-(866- 487-9243).
Waxaa kale oo aad qabsan kartaa qareen si aad u diiwaangeliso dacwad.
FMLA wuu joogsanayaaba haddii qofkii xanuunsanaa uu geeriyoodo. Loo shaqeeyaha khasab kuma aha inuu fasaxa kuu siiyo dhimashada qofka qoyskaaga ka tirsan, laakiin waxaa laga yaabaa in loo shaqeeyuhu kuu ogolaado in aad fasax u qaado “fasaxa geerida.” Kala hadal ama akhri nidaamka u degsan loo shaqeeyaha.
Haddii adiga qof aad kuugu dhow oo qoyska ka tirsan ay la il daran yihiin xanuun aad u daran ama xaalad caafimaad oo dhimirka ah dhimashada qofkaas dartiis, waxaa suurogal ah in aad qaadan karto fasaxa FMLA. Laakiin xaaladda caadiga ah ee ka dhalata geerida kama mid ah waxyaabaha uu ogol yahay fasaxa MFLA.
Fasaxa Bukaanka Iyo Badbaadada ee Minneapolis Iyo St. Paul
Haddii aad ka shaqeyso Minneapolis ama St. Paul, waxa aad qaadan kartaa fasax sida ay dhigayaan sharciyada xaunuunka Iyo Badbaadada.
Labada magaalaba waxa kuu ururaya 1 saac oo fasax ah 30kii saacadood ee aad shaqeysaba.
Waxaa kuu ururaya 48 saacadood sanadkiiba.
Minneapolis, haddii ay goobta ka shaqeeyaan 6 shaqaale ama wax kabadan, fasaxa caafimaadka waa in la siiyaa shaqaalaha.
Fasaxa Daryeelka Ilmo Dhaawac Gaaray ama Xanuunsan
Sharciga Minnesota waxa uu dhigayaa in ay shaqaalaha u ogolaadaan in ay isticmaalaan fasaxa bukaanka ee lacagta la siiyo (haddii uu ururay) si ay u xanaaneeyaan qof qoyska ka tirsan oo xanuunsan.
Shaqaalaha intooda badan waa in ay u ogolaadaan in shaqaaluhu isticmaalaan fasaxooda bukaanka (haddii uu ururay) si uu uga caawiyo dagaal qoyska dhex mara, xadgudub loo geysto, ama xaalad qashqashaad ah oo dhex marta shaqaalaha iyo qof qoyska ka tirsan.
Xubnaha ee sharcigan ogol yahay waa ilmaha (kuwa aad dhashay ama aad korsatay), xaaska/sayga, waalidka, sodohda, sodogga, ilmaha aad awoowaha u tahay, waalidka awoowaha kuu ah, iyo ilmaha aad hooyadood/aabahood isu dhaxdaan.
U.S. Department of Labor (Waaxda Shaqada Ee Mareykanka)